Ihe kpatara na ị ga - azụta ama ama dị elu | Akụkọ akụrụngwa
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị bipụtara isiokwu ahụ "6 ihe kpatara na ị gaghị azụta smartphone dị elu", nke butere ọtụtụ okwu na arụmụka mara mma n’etiti ndị na-akwado echiche nke ịzụrụ ihe a na-akpọ ngwa elekere dị elu na ndị kwenyere na itinye nnukwu ego na ekwentị enweghị isi.
Taa na itinye onwe anyị n'akụkụ ndị ọzọ, anyị ekpebiela inye gị Ebumnuche 6 mere ị ga - eji zụrụ smartphone dị elu, n'agbanyeghị na ego ịkwụ ụgwọ ga-adị oke elu. Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ a Galaxy S6 onu + ma obu a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Ma ị nwere obi abụọ, gụọ nke ọma n'ihi na ikekwe n'isiokwu a, ị ga-ekpochapụ ọtụtụ n'ime ha.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị gụchaa, ị ka nwere ụfọdụ aka ekpe, ị nwere ike iji netwọkụ mmekọrịta anyị na oghere echekwara maka nkwupụta na ntinye a ịjụ anyị maka ya na anyị na ndị niile na-agụ akwụkwọ anyị ga-anwa ịgwọ ha dịka o kwere mee. .
1 Ha anaghị efunahụ uru ha
2 Nanị imewe
3 Arụmọrụ dị elu
4 Igwefoto, akụ Chineke
5 Ga-enwe ama ruo ogologo oge
6 Nhọrọ ndị ị na-agaghị ahụ na smartphones ndị ọzọ
7 Ọnụahịa abụghịzi nsogbu
Ha anaghị efunahụ uru ha
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na maka smartphones nke a na-akpọ elu-ọgwụgwụ anyị ga-akwụ ụgwọ nnukwu ego, n'ọtụtụ ọnọdụ ha anaghị efunahụ uru ha ma ọbụlagodi na oge gafere, anyị nwere ike ree ha mgbe niile na ahịa nke abụọ, na-agbake nnukwu akụkụ nke ego etinye.
Dịka ọmụmaatụ, Apple iPhones, n'agbanyeghị ogologo oge gafere, na-aga n'ihu ịnwe nnukwu ọpụpụ na ahịa nke abụọ yana n'ọtụtụ oge, yana belụsọ na ngwaọrụ ahụ mebiri emebi ma ọ bụ mebie, anyị nwere ike ịnweta nnukwu ego maka ya. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike inyere anyị aka ịmegharị ọdụ anyị dị elu maka nke ọhụrụ na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ n ’ị ga - azụta ngwa ngwa eji adịkarị, buru n’uche na ị ga - akwụ nnukwu ego, mana na ị ga - enwe ike iweghachite ego na - atọkwa ezigbo ụtọ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, imewe bụ ihe kachasị mkpa gbasara ngwaọrụ mkpanaka, mana maka ndị ọrụ na ndị ọzọ ọ bụ akụkụ bụ isi. Ma nke ahụ bụ itu ọnụ nke inwe nanị ụdịdị bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-enwekarị mmasị na ya Ma agbanyeghị na maka nke a, ị ga-akwụ nnukwu ego, ọ bara uru.
Ihe a na-ekewaghị ekewa nke ama dị elu, na-enyekwa anyị oge ụfọdụ ohere ndị ọzọ na ahịa anaghị enye. Dịka ọmụmaatụ, ihuenyo Samsung Galaxy S6 ihu nwere atụmatụ pụrụ iche, mana ọ na-enyekwa anyị nhọrọ na atụmatụ nke ngwaọrụ ndị ọzọ anaghị enye anyị.
Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na anyị chọọ nke ọma, anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ mkpanaka ndị yiri ndị dị elu nke ukwuu maka ọnụahịa dị ala karị, mana ọ dị nwute na anyị ga-ahapụ ọtụtụ ihe n'azụ. Ma ọ bụ na dịka ọmụmaatụ Xiaomi smartphones na-enye anyị nnukwu arụmọrụ na ọnụ ala, mana n'ọtụtụ ọnọdụ ha enweghị elele nke LG G4, a iPhone 6S ma obu a Galaxy S6, ma ọ bụ nhazi ya pụrụ iche nke anyị kwurula banyere ya.
E nwere ọnụ ndị na-abawanye na nke ahụ nwere ike ezuru onye ọrụ ọ bụla, mana emehiela na ọ nweghị onye n'ime ha na-adị ndụ na nkọwa niile., nhọrọ ma ọ bụ imewe nke a na-akpọ elu-ọgwụgwụ ama.
Igwefoto, akụ Chineke
Ọ dabara ma ọ bụ na ọ bụghị igwefoto nke ngwaọrụ ndị adịkarịghị na-abụkarị igwefoto dị elu na nke ahụ na-enye anyị ohere nke ịse foto nke nnukwu mma yana na mgbe ụfọdụ enwere obere anyaụfụ na foto ndị ejiri kọmpat ma ọ bụ igwefoto mpịakọta. Dịka anyị na-anwa, ewepu mmadụ ole na ole, igwefoto nke njedebe nke ọkara ma ọ bụ obere dị ala anaghị enye anyị otu elele dị ka nke iPhone ma ọ bụ Samsung Galaxy nyere.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ igwefoto zuru oke, anyị nwere ike ịchọta ya na etiti ọdụ, mana anyị ga-ezughị oke n'ụzọ ụfọdụ ma anyị agaghị enwe ike ị nweta otu atụmatụ ma ọ bụ arụmọrụ dị elu.
Ga-enwe ama ruo ogologo oge
Thebọchị ị gara ịzụta ama dị elu ma nwee ịkwụ ụgwọ maka ya, otu na-ata ahụhụ, mana ka oge na-aga ọ mechara chọpụta na enwere uru karịa ọghọm. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na a na-emefu nnukwu ego maka HTC One M9 ma ọ bụ iPhone 6S, mana nke a Ọ ga - eme ka anyị nwee ngwaọrụ mkpanaka ruo ogologo oge, si otú a na - echekwa ego.
Ndị nne na nna na-ekwukarị na ọ ka mma ịzụta ihe dị mma karịa karịa ọtụtụ nke ọkara ma ọ bụ obere dị ala nke anyị ga-emegharị site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na echiche a, lee iPhone 4S mgbe ị na-aga n'okporo ámá nke a ka nwere ike ịhụ n'aka ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụrụ n ’ịzụrụ Samsung Galaxy S6 ihu + ugbu a, ị nwere ike ịkwa akwa otu izu maka akụnụba i mefuru, mana ị ga-enwe mkpanaka maka ogologo oge.
Nhọrọ ndị ị na-agaghị ahụ na smartphones ndị ọzọ
Ngwaọrụ mkpanaka dị elu mgbe ụfọdụ dị iche na ndị ọzọ na ahịa site na ụfọdụ nhọrọ ma ọ bụ atụmatụ. Ikekwe nke a adịghị mkpa ka ọtụtụ ọrụ kpọmkwem otu, ma ndị ọzọ ọ na-eme ka afọ ju ha a ukwuu na-enwe ha ngwaọrụ ọbụna karị na ọbụna ụfọdụ iji ndị a nhọrọ maka kpọmkwem ihe ndị dị mkpa.
Ikekwe ọnụahịa nke nhọrọ ndị a ma ọ bụ mmezi dị oke elu, mana n'oge ụfọdụ ọ bara uru ma ọ bụ na ị cheghị na ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ihe maka ihe ha na-enye anyị, maka iche iche, iPhone ma ọ bụ Samsung Galaxy.
Ọnụahịa abụghịzi nsogbu
Obi abụọ nke ịzụta ngwaọrụ dị elu na-ejikarị ọnụ ahịa ya dị elu ma ọ bụghị na mmadụ niile nwere nnukwu ego nke ọnụ ahịa ndị a bara uru. Ka o sina dị ruo ogologo oge ọnụahịa nke smartphones ndị a abụghịzi nsogbu Ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ekwentị, ụfọdụ ụlọ ahịa ma ọ bụ ọbụna ndị na-emepụta onwe ha na-eme ka ọ dịrị anyị mfe mgbe ịzụrụ ha.
Dịka ọmụmaatụ, Apple na-enye ego n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji nwee ike inweta iPhone ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nke ọtụtụ ndị ha na-ere. FNAC na-enye gị ohere ịzụta ekwentị ọ bụla site na ịkwụ ụgwọ ya na obere ntụsara ahụ na enweghị mmasi na Media Markt na-enye gị otu ohere site na ịkwụ obere ọmụrụ nwa.
Ndị na-ahụ maka ekwentị na-enyekwa anyị ohere ịkwụ ụgwọ nke ọma maka njedebe nke oku dị elu, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a na ọnụego ejikọtara yana ịnọnyere njikọ nke ọtụtụ nwere ike bụrụ nsogbu na ogologo oge.
Ogologo oge gara aga, inweta smartphone dị oke ọnụ bụ nsogbu nye ọtụtụ, mana taa na ekele maka akụrụngwa nke onye ọ bụla na-enye anyị, ọ bụ ihe dị mfe yana iru nke ndị ọrụ niile.
Kedu ihe kpatara ịchọta maka iji nweta ngwaọrụ dị elu?. You nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ebumnuche 6 mere ị ga - eji zụrụ ekwentị ọfụma na - enweghị mgbagha
Onye na-anaghị azụta akara kacha akwụ ụgwọ bụ maka na ọ nweghị ego ma ọ bụ na ọ chọghị ịma maka ekwentị, n’eziokwu, ewezuga igwu egwuregwu na-achọ mmadụ, ị nwere ike ime otu ihe ahụ na onye ọ bụla.